Imimmiselo nemiqathango - Ilahleko umva veki zonke zokubeka - 10% ukuya £ 100 |
Imimmiselo nemiqathango – Ilahleko umva veki zonke zokubeka - 10% ukuya £ 100
Le zokupasa ziya kuba esebenzayo phakathi 19 – 25th January 2017 (IGMT).
Inzuzo kuphela Ilahleko (P&L) umsebenzi ngeli thuba okupasa aza azibalwa isiqinisekiso ngenxa ilahleko emva.
Ilahleko Umva ziya kunikwa ngokwezinto ilahleko net (ilahleko imali yokwenene) yonke imidlalo slot.
Abadlali kufuneka ifakwe £ 10 kwithuba promotion ukuba qualify.In Kwimeko yokuba umnatha P yakho&L liye ngaphaya £ 10 ilahleko, uya kufumana inkxaso ebaliweyo 10% yelahleko yakho imidlalo slot ukuya ubuninzi £ 100.
ilahleko Ubuninzi imali kokusemva £ 100 imali yebhonasi.
iimfuno Standard bonus ubheja of 30x imali yebhonasi isicelo phambi iibhonasi okanye nayiphi lokuwina engqinelana kungarhoxiswa.
imali yebhonasi ezuzwe kule nokukhuthazwa, zingafezekiswa kuphela kusetyenziswa ukudlala games.Wagers zethu yokubeka into kwi Blackjack and Blackjack musa negalelo ekunciphiseni imfuneko ubheja imali eyintsalela yebhonasi.